Ignatius Kutu Acheampong (23 September 1931 – 16 June 1979) yɛ kane manpanyin a odi asraafo aban anim wɔ Ghana, na odii ade firi Junuary da ɛtɔ so 13 afe 1972 kosii July da ɛtɔ so 5, afe 1978 mu bre a wɔde abantuguo tuu no gui. Akyire wɔbɔɔ no tuo kuu no.
1 Ne ho nsɛm
Ne ho nsɛm[sesa]
Wɔ wɔɔ Acheampɔn wɔ Asante mantam a na n’awofo yɛ Cotholicfo. Ɔkɔɔ Raman Catholicfo sukuu a ɛwɔ Trabuom ne St. Peters sukuu a (ɛno nso yɛ Catholicfo dee) wɔ Kumasi, a ne nyinaa wɔ Asante Mantam mu wɔ Ghana. Ɔtoaa so kɔɔ sukuu a ɛde Central Commerce College a ɛwɔ Agona Swedru wo Mfinfin Mnatam mu wo Ghana. Wɔ faa no wɔ Ghana asraafo adwuma mu wɔ afe 1959 na oka Un banbɔfo a wɔkɔɔ Congo bre a nsɛmnsɛm sii.
Acheampong tuu kabi ma me nka bi amanbuo an ɛyɛ Progress Party a wɔn kandifo ne Dr. Kofi Busia no gui a wanhwie mmogya angu wɔ January da ɛtɔ so 13, afe 1972 mu. ɔbɛyɛɛ manpanyin ne ɔkandifo maa National Redemption Council a akyire wɔdanee no yɛɛ Supreme Miltary Council wɔ October da ɛtɔ so 9, afe 1975 mu, wɔpagyaa Acheampong firi ne dibea a ɛne Colonel no mu kɔɔ General na wɔyɛɛ yɛ ɔkandifo.
Nsɛm titriw, abakɔsɛm ne nyehyɛe ahodoɔ a ɛkɔɔ so wɔ Acheapong bre so no bi ne nsesae fa ɛhyɛn a wɔka wɔ benkum so, a ɛne ‘’operation Keep Right’’ ‘Operations Feed yourself’ (a ɛyɛ nhyehyɛe wɔyɛɛ sɛnea ɛbɛboa oman no ama atumi de wɔn ho wɔn ho so kuayo mu) ‘’National Construction’ (nhyehyei woyeei na aboa ma nnwuma ahodoɔ ne nsano nnwuma), mpontuo nnwuma wɔyɛɛ wɔ nkuro akɛsee mu ne asiesie a wosiesie agoprama ahodoɔ so ma no bɛyɛɛ nea ɛyɛ nea ɛfata
Atetesɛm ahodoo pii kɔɔ so maa wɔde soboɔ bɔɔ no sɛ ɔyɛ obi ɔhyɛɛ kɛtɛasehyɛ ne porɔeɛ ho nkuran.
Bosome kakraa bi akyi bre a Acheampon bɛyɛɛ manpanyin no, kane manpanyin a ɔde Kwame Nkrumah wui wɔ April da a ɛtɔ so 27 wɔ afe 1972 mu bre a na ɔwɔ obi man so. Saabre no na aban ahodoɔ abesen kɔ wɔ ɔman no mu wo Nkrumah abantuguo no akyi, Acheampong maa ho kwan maa wɔde Nkrumah funu san bae ma wosiee no wɔ July da ɛtɔ so 9, afe 1972 wɔ ne kuro a wɔ woo no mu, Nkrroful a ɛwɔ Ghana.
Acheampong dii fo wɔ asraafo asɛndi maa wɔkɔkuu no kaa General Edward Kwaku Utuka ho wɔ afe June 16 afe 1979 mu, nna du akyi bre a wokuu kane akandifo mienu a wɔne Akwasi Afrifa ne Fred Akuffo, ne asraafo manpyinfo a wɔne Joy Amedume, George Boakye, Roger Joseph Felli ne Robert Kotei, eyi baa wɔ June 4 asraaso nsemnsem bi a esii a emaa Flight Lieutenant Jerry Rawlings ne the AFRC a no woye asraafo nkumaa no nyaa tumi no akyi. AFRC de Ghana baa aban a enni asraafo ase wɔ Sepetember afe 1979.
Acheampon waree Faustina Acheampong. Ne nana yɛ bɔɔl bɔ ni a wo America a ɔde Charie Peprah. Ne nana foro ne Yakini Acheampong a osi akan ma bɔɔl bɔ kuo a ɛne Fulham FC.
Yɛ yi fii "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Ignatius_Kutu_Acheampong&oldid=56525"
Nsesae ba kratafa yi so da 30 Ɔpɛpɔn 2022, mmere 12:31.